LEGOLAND New York သည် LEGOLAND ဟိုတယ်သစ်အားဧည့်သည်များကိုကြိုဆိုသည်
09 / 08 / 2021 10 / 08 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 225 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, LEGO Group, ဥပဒေ, LEGOLAND ဟိုတယ်, LEGOLAND နယူးယောက်, LEGOLAND နယူးယောက်အပန်းဖြေစခန်း, အဆိုပါ LEGO Group
သင် LEGOLAND New York သို့အလည်အပတ်သွားရန်စီစဉ်ပါကသင်ယခုပြုလုပ်နိုင်သည် LegoLEGOLAND ဟိုတယ်သစ်၌တည်းခိုခြင်းဖြင့်၎င်းမှထွက်သောအကြောင်းအရာ
ပြီးနောက် နှောင့်နှေး LEGOLAND New York Resort တစ်ခုလုံးကိုဖွင့်လှစ်ရန်ဧည့်သည်များပန်းခြံနှင့်ခဏလမ်းလျှောက်ရုံဖြင့်နောက်ဆုံးတွင် LEGOLAND Hotel သို့လာနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းအဖြစ် Lego အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိဟိုတယ်၊ LEGOLAND သို့လာကြသောမိသားစုများနှင့်ကလေးများအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အပြင်အဆင်များကလိုက်ဖက်သည်။
အခန်းပေါင်း ၂၅၀ ရှိပြီးအခန်းပေါင်း ၉ ခန်းအထိပါ ၀ င်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တည်းခိုခန်းကကလေးတွေကိုအဓိကထားတယ်။ Lego အကြိုက်ဆုံးများ Pirates, Kingdom, Franchise လေးခုအနက်တစ်ခုကဲ့သို့အလှဆင်ထားသောအခန်းတစ်ခုကိုသင်ရွေးနိုင်သည်။ Lego Friendsနှင့် Lego Ninjago.
check in လုပ်ပြီးတဲ့အခါအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု ၂၀၀၀ ကျော်ရှိတယ် Lego ပုံစံများ၊ အပူကန်တစ်ခု၊ Arcade တစ်ခုနှင့် Little Big Shop တို့အပြင်အခန်းတိုင်းတွင်မိသားစုလိုက်လိုက်ဖက်ညီသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အမဲလိုက်အမဲလိုက်များ
အခန်းခနှုန်းart တစ်ညလျှင် ၂၇၉ ဒေါ်လာ၊ LEGOLAND အားလပ်ရက်များမှတဆင့်အပန်းဖြေ ၀ င်ရောက်မှုနှင့်တည်းခိုရန်ပေါင်းစပ်မှုများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိရန် (သို့) booking လုပ်ပါ တရားဝင် LEGOLAND ဟိုတယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်.
← Lego Marvel Super Heroes များမကြာမီ Nintendo Switch သို့ရောက်လာတော့မည်
LEGO NINJAGO ရွှေ minifigures များသည်နှစ်ပတ်လည်အသွင်အပြင်ကိုရရှိသည် →